‘ग्राहकलाई सहज सेवा दिन टोकन प्रणाली लागु गर्दैछौं’ - Paschimnepal.com
‘ग्राहकलाई सहज सेवा दिन टोकन प्रणाली लागु गर्दैछौं’
विश्वाशीलो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सुर्खेतले आगामी असोजदेखी टोकन प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने योजनामा छ । जनताले बढी विश्वास गरेको बैंकमा कहिले काहीँ बढी भीडहुँदा प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो पनि गुञ्जयमान हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सेवालाई छिटो छरितो बनाउन कस्तो खालको योजना बनाएको छ त ? यसै सन्दर्भमा रहेर एघार दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा सुर्खेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रवन्धक अरुण ढुंगानालाई पश्चिमनेपाल डटकमका लागि सुशील खड्काले कुराकानी गरेका छन् ः–
आज भोली के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
बैंकको दैनिक कारोवार बारे जानकारी लिने गरेको छु । साथै नागरिकहरुलाई प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनमा व्यस्त छु । सीमित काउन्टरबाट मात्रै सेवा दिँदा नागरिकहरुले ढिला सेवा पाएको महशुस भएपछि थप काउन्टर स्थापना गरेर सेवा शुरु गरेका छौं ।
जनताले अलि बढी विश्वास गरेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेवा छिटो छरितो नभएको गुनासो छ । बैंक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तपाईँको योजना के छ ?
जनशक्तीको अभावले कतिपय समयमा नागरिकहरुलाई हामीले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सत्य नै हो । यसको अर्थ सेवा पाउँदै नपाएको भन्ने हैन् तर केही ढिलाई हुने गरेको हो ।
नागरिकले बढी विश्वास गरेकै कारण ग्राहकहरुको चाप बढी हुनु स्वभाविकै पनि हो । तसर्थ हामीले सकेसम्म बैंकमा आएका ग्राहकहरुलाई सेवा नदिएर फिर्ता गरेका छैनौं । भलै केही समय लाग्यो होला तर सेवा दिएरै पठाएका छौं ।
लामो समयदेखी लाइनमा लागेर सेवा नपाएको जनगुनासो बढेपछि हामीले टोकन (क्युमेशीन) प्रणाली सुरु गर्न लागेका छौं । सम्भवत् हामीले दशैं अघि वा नभए तिहार लगत्तै टोकन प्रणाली लागु गर्छौं ।
यसले ग्राहकहरुलाई लामो समयसम्म लाइनमा बसी राख्नु पर्ने झन्झटको अन्त्य गर्नेछ । मेशीन आइसकेको छ । विद्युत अनियमित हुँदा अहिल्यै सञ्चालनमा ल्याउन मात्रै नसकेका हौं । टोकन सिस्टम लागु भएपछि पालो अनुसार ग्राहकहरुले समयमै सेवा उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ ।
बैंकले हाल कस्ता–कस्ता सेवाहरु प्रवाह गर्दै आएको छ ?
सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक दैनिक हामीले काउन्टरबाटै बैंकिङ सेवा त दिइनै राखेका छौं । यसका अलवा मोवाइल, एसएमएस र एटिम सेवा पनि ग्राहकहरुलाई दिँदै आएका छौं । एटिम सेवालाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढेका छौं । निकट भविष्यमै इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सुरु गर्न छलफलमै छौं ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अन्य व्यस्त ठाउँहरुमा एटिम सेवा दिने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ?
प्रदेश राजधानीमा बैंकको एउटै एटिएम सेवाले मात्रै पुग्दैन् । एटिएम सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने बैंकमा भीड पनि त कम हुन्छ । तसर्थ, हामीले केन्द्रीय कार्यालयसंग छलफल गरेर वीरेन्द्रनगर क्षेत्रका व्यस्त ठाउँहरुको पहिचान गरेर बैंकका थप एटिएम सेवाहरु सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं । तर मेरो कार्यालयमा यो सेवा शुरु गर्न लागिपर्नेछु ।
बैंकले हाल कस्तो क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दै आएका छ ?
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ग्राहकहरुको आवश्यकताका आधारमा लागनी गर्दै आएको छ । बैंकको आफ्नै नीति छ, सोही अनुसार आवश्यकता अनुसार त लगानी गरिरहेका छौं । योसंगै व्यवसायिक, कृषि, आवास, गाडी र विपन्न वर्गका लागि कर्जा उपलब्ध गरारहेका छौं । हालसम्म बैंकमा सबै प्रकारका खाता खोल्ने ग्राहकहरुको संख्या झण्डै ५० हजार पुगेको छ । यी चल्ती, बचत र मुद्धती खाता भएका ग्राहकहरु हुन् ।
बैंकले विद्यापुर र मेहलकुनाबाट पनि सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यहाँ बैंक छ भन्ने थाहा नपाएर कतिपय ग्राहकहरु वीरेन्द्रनगर नै आइरहेका छन । उहाँहरुलाई यस विषयमा जानकारी गराउन किन नसक्नु भएको हो ?
बाणिज्य बैंकका सेवा बारे जानकारी नपाउँदा कतिपय ग्राहकहरु घटौं यात्रा गरेर वीरेन्द्रनगर आएर सेवा लिइरहेको सत्य हो । हामीले यहाँ आएका ग्राहकहरुलाई तपाईँहरुको नजिकको शाखा यो–यो ठाउँमा छ भनेर कर्मचारीहरुमार्फत जानकारी पनि गराइराखेकै छौं ।
तर बैंकप्रति ग्राहकहरुको चेतनास्तर कम भएकै कारण होला उहाँहरु वीरेन्द्रनगर धाइराख्नु भएकै हुन्छ । यो कार्यमा तपाईँ पत्रकारहरुले पनि जानकारी गराइदिनु पर्छ । बैंकले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट ग्राहकहरुलाई जानकारी गराइरखेका छौं । विस्तारै उहाँहरु बैंकका शाखा वीरेन्द्रनगर बाहिर छन भनेर बुझ्नु हुनेछ र त्यहीँबाटै सेवा लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्न चाहेको केही छ ?
सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई बचत गर्ने वानीको विकास गरेर बैंकिङ कारोवार जोडिन आग्रह गर्दछु । ग्राहकहरुलाई सरल र सुरक्षित सेवा दिन हामी कटिवद्ध छौं । सुर्खेतमा बैंकका विद्यापुर र मेहलकुनामा पनि शाखा छन् त्यहाँबाट त्यसै क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सेवा लिन अनुरोध गर्दछु ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ६, २०७५ 7:30:59 AM
Prevपुरानो हिन्दी गीतको झझल्को दिने नेपाली गीत तिम्रो रुपले ( भिडियोसहित)
Nextफ्राेस गाडी र माेटरसाइकल ठाेक्कीदा गाउँपालिका अध्यक्ष र इन्जिनियर घाइते